कांग्रेसको महासंकट- रामचन्द्र पोख्रेल | mulkhabar.com
February 9, 2018 | 7:59 am 250 Hits
२०१५ सालको ‘आमचुनाव’मा दुई तिहाइ स्थानमा विजय हासिल गरी ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ नीति कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई कामै गर्नै नदिई डेढ वर्षमै ‘कू’ गरियो ।
त्यसको ठिक ५९ वर्षपछि सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले वाम गठबन्धनबाट भारी पराजय व्यहोर्दै अहिलेसम्मकै गम्भीर परिस्थितिबाट गुज्रँदैछ । २०१५ सालको आमचुनावमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ४ स्थानमात्र ल्याउन सफल भएको थियो । भरत शमशेर नेतृत्वको गोरखा परिषदले १९ स्थान हासिल गरी दोस्रो शक्ति बनेको थियो भने अहिले कांग्रेस गोरखा परिषदको हैसियतसम्म पनि पुग्न नसक्नु विचित्रको परिस्थित हो । त्यसबखत प्रतिनिधिसभाका लागि जम्मा १०९ क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।यस पटकको आमनिर्वाचनको मुखमा अप्रत्यासित तवरले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सम्पन्न वाम गठबन्धनको घटनाले देशको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र नभई कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत व्यापक तरंग पैदा गर्‍यो ।
वाम गठबन्धन घोषणापश्चात सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग चिनियाँ राजदूतले भेट गर्नुभयो । तर भेटघाटमा यसबारे कुराकानी भएको कुरा प्रकाशमा आएन । राजनीतिक वृत्तमा भने यो गहिरो चासोको विषय बनेको थियो । तर भेटघाट पछिका बाहिरी चर्चामा भने चिनियाँ राजदूतले वाम गठबन्धनमा चिनियाँ हात रहेको भन्ने प्रचार ‘सत्य नभएको’ र चीनको कुनै संलग्नता नरहेको भनी प्रधानमन्त्रीलाई आवश्वस्त पार्नुभयो सुनियो । त्यसैबीच वाम गठबन्धनलाई लिएर अर्को चर्चा पनि चल्यो । त्यस अनुसार वाम गठबन्धन हुनुमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरूको हात रहेको भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूमाझ कुरा भएको पनि सुनियो । साथै भारतका हिन्दु अतिवादी संस्था र दलहरूको पनि यस निर्वाचनमा गहिरो चासो रहेकोबारे टिकाटिप्पणी नभएका होइनन् ।
तत्कालीन घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा वाम गठबन्धनलाई हेर्दा यो मिहिन तरिकाले रचिएको दीर्घकालीन रणनीतिक उद्देश्य सहितको खेल थियो भनी अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी वाम गठबन्धनको राजनीतिमा केही पश्चिमी राष्ट्रका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको समेत चासो रहेको कुरा प्रचारमा आएको हो । नेपालको राजनीति भारत र चीनबीच नेपालको रणनीतिक अवस्थिति मध्यनजर राख्दै वाम गठबन्धनका सन्दर्भमा उनीहरूको चासो रहेको चर्चा पनि नभएको होइन । यसरी विभिन्न क्रिया/प्रतिक्रियाका बाबजुद नेपाली कांग्रेसले भने यस विषयमा हारको मार खपेर पनि कुनै कसैका विरुद्ध उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया दिएन । बरु यसलाई देशभित्रकै राजनीतिक दाउपेच र आन्तरिक खेलको रूपमा हेर्‍यो । किनभने आफ्नो नेतृत्वको सत्ताको साझेदार पार्टी माओवादी–केन्द्रबाट निर्वाचनको मुखमा आएर भएको अप्रत्यासित ‘अलगाव’ नेपाली कांग्रेसका लागि एक जबर्जस्त धक्का थियो ।
झट्ट हेर्दा वाम गठबन्धन सरल हिसाब–किताब र तात्कालिक सत्ताको लाभबाट निर्देशित एउटा घटना थियो । तापनि यसका पछाडि के कस्ता कारण र उद्देश्यहरू थिए र त्यसलाई कसरी लिने त्यो भने आन्तरिक राजनीतिको बुझ्नुपर्ने गहिरो पक्ष बनेर रहेको छ । तत्कालीन घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा वाम गठबन्धनलाई हेर्दा यो मिहिन तरिकाले रचिएको दीर्घकालीन रणनीतिक उद्देश्य सहितको खेल थियो भनी अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कुनै समय नेपालको बाह्य सम्पर्क भारतीय मार्गबाट मात्र हुने गरेको अवस्था थियो । त्यतिखेर नेपालमा हरेक राजनीतिक घटनामा ‘विदेशी हात’ भन्नासाथ भारत लक्षित हुन्थ्यो । तर २०४६ सालको बहुदलीय राजनीतिको पुन:स्थापना पश्चात् नेपाल विश्वबाट ‘आइसोलेटेड’ अवस्थामा रहेन । तत्पश्चात् नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सकारबाट प्रारम्भ भई विस्तारै बाह्य सम्पर्क र सम्बन्धको विविधीकरण र विस्तारीकरण अगाडि बढ्यो । साथै छिमेकी चीन र भारतको द्रुत आर्थिक विकाससँगै दुवैसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा पनि थप विकास र विस्तार प्रारम्भ भयो भने पश्चिमी राष्ट्रहरूको यस क्षेत्रमा बढ्दो अभिरुचि र ब्रिटिस उपनिवेश कालदेखिको सम्पर्कको पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रियतासमेत बढ्दै जानु स्वाभाविक थियो ।
त्यसैले हाम्रो देशको राजनीतिक घटनाहरूमा ‘बाह्य शक्ति’को खेल भनी राजनीति अतिरञ्जना गर्ने गरिएका पनि छन् । विशेषगरी निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्ने पार्टीलेविजयी पार्टीका पक्षमा विदेशी चलखेल भएको देख्नु कुनै नौलो कुरा होइन । यथार्थमा मुलुक भित्रकै आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर हुँदा नै बाह्य चलखेलको बढी सम्भावना रहन्छ ।
यस पटकको पराजय नेपाली कांग्रेसका लागि अप्रत्यासित तथा जबर्जस्त धक्का भएको छ । यसका लाखौं कार्यकर्ताका लागि वज्रपात भएको छ । आफ्ना वरिष्ठ नेतादेखि केन्द्रीय नेतृत्वमा निरन्तर सक्रिय हस्तीहरू जो अपराजयजस्तो मानिन्थे, तीसमेत आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा वाम गठबन्धनबाट पराजित हुनु निश्चय पनि गम्भीर चोटको विषय हो । अनेक राजनीतिक दर्शन र समयचक्रको स्वाभाविक खेल भनी यसमा चित्त बुझाउन खोजे पनि यो हारको कारण भने खोजी भइरहनेछ ।
यस असफलताका कारण र जड के हुन् ? यस पछाडि को थियो ? दोषको बन्दुकनाल अर्कोतिर फर्काएर आफू चोखो बन्ने प्रयास पनि भइरहलान् । तर त्यसले लाखौं कार्यकर्ताका मनमा गुज्रिरहेको पराजयको पीडा बिर्साएर विजयको प्रकाश भने ल्याउन सक्ने छैन । बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा अनगिन्ती सेनानीहरूको बलिदानी संघर्षले स्थापित गरेको नेपाली मोडलको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को शिरै झुक्नेगरी भएको हारको पीडालाई हल्का किसिमबाट लिन सकिने स्थिति देखिँदैन ।
कांग्रेसले आमनिर्वाचनको परिणामलाई खेलको नियम अनुसार स्वीकार गरिसकेको छ । सरकारले आफ्नो बहिर्गमनको तालिका पनि मिलाइसकेको छ । कथं हस्तान्तरणको समय लम्बिँदै गयो भने त्यो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको प्रथम दाबेदार ठान्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसको हैसियत अनुरुप हुने छैन । जे होस्, नेपाली कांग्रेसका लागि यसपटक महासंकट आएको छ । हरेक निर्वाचनमा प्रथम स्थान, नभए पनि दोस्रो स्थानमा पुग्दा संसदमा बलियो उपस्थिति रहँदै आएको परिस्थिति अब छैन ।
निर्वाचनलाई त्यस प्रकारको स्थितिबाट बचाउन र निर्वाचनलाई धनसम्पत्तिको खेल नबनाउन, स्वच्छ र सरल लोकतान्त्रिक निर्वाचन विधि तथा व्यवस्था बचाइराख्न कांग्रेसले आफै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
हामीले प्रतिपक्षका कुनै एक दललाई साथ लिएर सरकार बनाउने हैसियत पनि रहेन । त्यसैले सत्ताको खेलमा खेल्ने बलियो सम्भावना पनि रहेन । हरेक आन्दोलन र क्रान्तिको अगुवा कांग्रेसको हैसियत यसरी खस्किनुमा धेरै कारण होलान् । तर सबैभन्दा शर्मनाक ‘अन्तरघाती’ खेल हो । सम्भवत: प्रत्येक आमनिर्वाचनमा अप्रत्यक्ष भोग्न थालिएको यो लज्जाजनक प्रकृति यसपटक शिर झुकाउनेगरी झन्डै खुला किसिमले प्रकट भएको छ ।
पार्टी पराजयको पीडा र अभिव्यक्ति समसामयिक लेखहरूमा पार्टीका चिन्तकहरूबाट आउन थालेका छन् । राजधानीभित्र र बाहिरबाट प्रकाशित ती लेखहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसको पराजयको पीडाका रूपमा केन्द्रित रही धेरैले लेखेका छन् । केहीले निकै मार्मिक गहिराइ छिचोल्ने प्रयास पनि गरेका छन् । तथापि कांग्रेसको पराजयसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा आउन थालेको असन्तुलनबारे आउनुपर्ने विचार अझै आउनसकेको छै्रन ।
स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार र संघीय (केन्द्र) सरकारसम्म झन्डै एकै किसिमबाट असन्तुलन देखिएको छ । त्यसैले कांग्रेसको भारी पराजयबाट पैदा हुने राष्ट्रिय राजनीतिको असन्तुलनले निम्त्याउन सक्ने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबाट अब देशमा नसोचिएको स्थिति पनि पैदा हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ । वाम गठबन्धनले सत्ता सम्हालेपछि कांग्रेसले सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति र चुनौती हामीले अहिले सोचेको भन्दा धेरै फरक ढंगले जान सक्छ । त्यस स्थितिमा नेपाली कांग्रेसले सामनागर्नुपर्ने आन्तरिक र बाह्य चुनौती आजसम्म अनुभव नगरिएको धेरै फरक एवं कठिन हुन सक्नेछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका दुई प्रमुख जिम्मेवारी थिए । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा र पार्टी सभापतिको हैसियतमा । वाम गठबन्धन पश्चात् गणितीय हिसाबले वाम शक्तिसँग कडा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित थियो । पार्टीले अपेक्षित नतिजा निकाल्न धेरै मिहेनत गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट थियो । झन्डै प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने स्पष्ट लक्षण हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनबाट कुनै हालतमा पछाडि नहट्ने संकल्प ठिक थियो । संविधान कार्यान्वयनको यो चरणमा सरकारले निर्वाचनबाट पछाडि नहट्ने अठोट जायज थियो ।
तर प्रधानमन्त्री देउवाका काँधमा पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीसमेत रहेकाले पार्टीलाई निर्वाचनमा सम्मानजनक हैसियतमा ल्याइपुर्‍याउनु पनि उहाँको कर्तव्य थियो । जुन कुरामा उहाँ चुक्नुभयो । उहाँले हेर्दाहेर्दै नेपाली कांग्रेसको बलियो किल्ला ठानिएका जिल्लाहरूमा समेत अप्रत्यासित पराजय भोग्नुपर्‍यो । यसबाटउत्पन्न विषम परिस्थितिलाई उहाँले अब कसरी हेर्नुहोला, त्यो अहिलेलाई अनुमानकै विषय रह्यो ।
पार्टी कार्यकर्ताको मनोबलको संरक्षणमा नै पार्टीको आत्मा जीवन्त रहेको हुन्छ । लामो समयदेखि पार्टीले यस पक्षको बेवास्ता गरेको अनुभव आम कार्यकर्ताले गर्दै थिए । यस सन्दर्भमा वाम गठबन्धनको लहरले मतदाताहरूलाई हाम्रा कार्यकर्ताबाट अलग–थलग गराउन प्रयोग गरेका अनेक हत्कण्डा प्रभावी बन्न गएका हुन् । ह्रास हुँदै गएको कांग्रेस कार्यकर्ताको प्रतिरोध क्षमता बुझेर नेपाली कांग्रेसको ‘भोटबैंक’मा प्रहार गर्ने हिम्मत गरेका हुन् । त्यसमाथि वाम गठबन्धनको अज्ञात स्रोत र साधनको परिचालन कल्पनाभन्दा बाहिरको थियो ।
यसलाई कांग्रेसले मुकाविला गर्नै सक्दैनथ्यो । त्यसैले पार्टीले यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने घडी थियो र अहिले पनि छ । निर्वाचनलाई त्यस प्रकारको स्थितिबाट बचाउन र निर्वाचनलाई धनसम्पत्तिको खेल नबनाउन, स्वच्छ र सरल लोकतान्त्रिक निर्वाचन विधि तथा व्यवस्था बचाइराख्न कांग्रेसले आफै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि यस पक्षमा पार्टी चुक्यो भने बिथोलिएको आम मतदाताको मनलाई एकीकृत गरेर फेरि चारतारे झण्डा वरपर आकर्षित गर्न कठिन पर्नेछ ।
धेरै अघिदेखि उग्र वामपन्थीतिर वामशक्तिको सैद्धान्तिक भावना संख्यामा नभए पनि विचारमा अहिलेभन्दा सशक्त थियो । तर निर्वाचन जितेर पनि भित्रबाट उसले सैद्धान्तिक पराजय व्यहोर्दैछ ।
आजसम्मकै राजनीतिक इतिहासमा दक्षिणपन्थी र वामपन्थी शक्तिबीच सन्तुलन कायम राख्ने एउटा भरपर्दो लोकतान्त्रिक शक्तिको सफल भूमिका खेलेको नेपाली कांग्रेस यस आमनिर्वाचनबाट रक्षात्मक अवस्थामा खुम्चिन पुग्नु चिन्ताको विषय बनेको छ । विचार र आदर्शले मात्र राष्ट्रिय राजनीतिमा सन्तुलनको भूमिका रहन सक्दैन । देशको सर्वोच्च विधायिकामा त्यसै अनुरुप बलियो उपस्थिति रहनुपर्छ । त्यो रहेन । दोस्रो, यस निर्वाचनबाट अन्य पार्टीमा हावी भएको विकृतिबाट नेपाली कांग्रेसलाई पनि जोगाउन सकिएन ।
निर्वाचनमा भारी मतले विजयी वाम शक्तिभित्र पनि ‘राजनीतिको क्षयीकरण’ प्रारम्भ भएको छ । यसले गर्दा माओवादी केन्द्रलाई समेत आफ्नो अस्तित्व रक्षाको गम्भीर स्थिति आइपरेकै हो । विजयी प्रथम शक्ति एमालेभित्र यान्त्रिक रूपले निर्वाचन जित्ने खेलमा प्रारम्भ भएको ‘राजनीतिक क्षयीकरण’ डरलाग्दो छ । धेरै अघिदेखि उग्र वामपन्थीतिर वामशक्तिको सैद्धान्तिक भावना संख्यामा नभए पनि विचारमा अहिलेभन्दा सशक्त थियो । तर निर्वाचन जितेर पनि भित्रबाट उसले सैद्धान्तिक पराजय व्यहोर्दैछ ।
मधेस केन्द्रित दलहरूले स्थापित गर्न खोजेको मूल्य–मान्यता र आदर्श पनि यस निर्वाचनबाट अत्यन्तै कमजोर सावित भएको छ । यसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा हैसियत राख्ने प्रमुख दलहरूभित्र आएको राजनीतिक ह्राससँगै नेपाली कांग्रेसको हार राष्ट्रिय राजनीतिकै क्षयीकरणको संकेत हो । यसले राष्ट्रलाई कहाँ पुर्‍याउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो सन्तुलन कायम राख्ने हैसियतको नेपाली कांग्रेसको पराजय राष्ट्रकै लागि भयंकर ठूलो क्षति नबनोस् ।- कान्तिपुरबाट